मन्डारिन शर्बत - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
पेय2 मिनेट8 व्यक्ति
यो म्यान्डारिन शर्बत क्रिसमसको क्लासिक हो। मन्डारिनहरू मिठो हुने बित्तिकै नै, म जहिले पनि केही केल किन्छु र म आफैं आफ्ना नानीहरूसँग पिलो बनाउन र ½ किलो प्याकेज बनाउन प्रोत्साहित गर्छु। तिनीहरूलाई स्थिर गर्नुहोस्.
हप्ताको अवधिमा हामी घरमा खाना गर्दैनौं तर सप्ताहन्तमा मेरो श्रीमान् र म खाना पछि रमाइलो गर्न चाहन्छौं। आइसक्रिम वा शर्बत। त्यसोभए, यस हप्ताको अन्तमा उनले टेंजरिन शर्बत छोए।
यो कस्तो धनी बाहिर आउँछ! जहिले पनि यसले हामीलाई बौलाहा बनायो। र केहि राम्रो हामीलाई धेरै राम्रो सूट, हामीलाई पाचन राम्रो गर्न मद्दत गर्दछ। साथै केही मिनेटमा यो पिउन तयार छ।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु फललाई फ्रीज गर्नुहोस् कुनै पनि शर्बत पनि तयार गर्नका लागि तिमीलाई बरफ चाहिएको छैन र तपाईं फल एक सय प्रतिशत को सबै स्वाद आनन्द।
फ्रिज गर्ने फलका लागि उत्तम खण्डहरू वा टुक्राहरू अलग ट्रेमा स्थिर गर्नु हो र एकपटक स्थिर भएपछि हामी त्यसलाई झोलामा राख्न सक्छौं। तिनीहरूलाई ब्यागमा सिधा नराख्नु महत्त्वपूर्ण छ किनभने तिनीहरू ब्लक बनाउँदा फ्रिज हुनेछन् र हाम्रो शर्बत राम्रो हुँदैन।
एक मात्र कुरा sorbets पहिल्यै जमेको फलको साथ कागती, चिनी र एक सानो पानी।
1 मन्डारिन शर्बत
फलको साथ बनेको Sorbets कुनै पनि अवसरको लागि उत्तम हुन्छ।
१००० ग्राम म्यान्डारिन
Le लेमन (बीउ वा कुनै सेतो भाग बिना सोलिएको)
हामीले गिलासमा चिनी हालेर कुच्यौं Seconds० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति -30-१०।
हामी स्थिर मैन्डारिनहरू, निम्बू र पानी थप्दछौं। हामी गिलास बन्द गर्छौं र spatula मुखबाट spatula राख्छौं वरिपरि जानको लागि र यसलाई सजीलो कुचल्न। हामी अधिकतम गतिमा समय तालिका बनाउँदैनौं र हामी क्रिमी बनावट नभएसम्म अवलोकन गरिरहेका छौं।
हामी चश्मामा तुरून्त सेवा गर्दछौं।
थप जानकारी - यस गर्मीमा super सुपर-रिफ्रेसि s शर्बतहरू
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ 15 मिनेट भन्दा कम, क्रिसमसको, Postres, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Postres » मन्डारिन शर्बत
स्वादिष्ट !!! मसँग कुनै अप्रत्याशित भ्रमणका लागि स्थिर मन्डारिनहरू पनि छन्, किनकि यो एक क्षणमा गरिन्छ र यो उत्तम देखिन्छ!
हो जेसी, "दूरदर्शी महिला दुईको लायक छ" मेरी हजुरआमाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। मसँग जहिले पनि जमेको फल हुन्छ, हिजो मात्र मैले मेरो पतिको लागि तरबूज बनाएको थिएँ। हामीलाई मन पर्छ!
सेलो forés भन्यो
फल फ्रिज गर्ने राम्रो उपाय हो, मैले स्ट्रबेरीको साथ गरेँ किनकि म भ्यालेन्सियामा बस्छु र मेरो बुवाको एउटा बगैचा छ त्यसैले उसले रोप्यो र जब स्ट्रबेरी छ, यो किन्ने छैन जब त्यहाँ स्ट्रबेरी दिन जान्छ र दिनुहुन्छ तर यो हुँदैन सुन्तला र सुन्तला तर यो मसँग भएको थिएन र के फल पनि स्थिर गर्न सकिन्छ? २०११ को शुभकामना
सेलो फोर्सलाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो चेलो, मैले अनानास, तरबूज र खरबूज जमेको छु। बाँकी फलहरू मलाई थाहा छैन उनीहरू कस्तो हुन्छन्। बधाई र २०११ मुबारक!
Mª जोस लोपेज भन्यो
मेरो श्रीमान् मधुमेह रोगी हो र म यी साचो sorbets, डेसर्ट, आदि बनाउन सक्षम हुन, Saccharin, फ्रुक्टोज, आदि को सम्बन्ध मा चिनी को समानता जान्न चाहन्छु। धन्यवाद र अभिवादन
Mª JOSE LOPEZ लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईको श्रीमान मधुमेह रोगी हो भने उसले फ्रुक्टोज लिन सक्दैन, फ्रुक्टोज दुई ग्लुकोज अणुहरू मिलेर बनेको हुन्छ, कुनै अन्य मिठाईले तपाईको लागि काम गर्छ, स्याकारिन, एस्पार्टम, एसिटिलसल्फ्याम, ट्याब्लेटमा वा तरलमा, मलाई थाहा छ म के कुरा गर्दैछु किनकि म नर्स हुँ। र म आफूलाई मधुमेह रोग को शिक्षा को लागी वर्षौं बितिरहेछु
जानकारी को लागी धेरै धन्यवाद, पिलर। जब कसैले हामीलाई सोध्यो म नोट लिन्छु। बधाई र शुभ छुट्टि !.
मो कार्मेन मारन भन्यो
चिनी र साचारिनको समानता हो: १०० ग्राम चिनी = १० ग्राम पाउडर स्याचारिन, यद्यपि मँ सँधै थोरै थप्छु।
Mª Carmen Marín लाई जवाफ दिनुहोस्
मा जोसेले यो काम गर्दछ र तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाइँको पतिले यसलाई कसरी माया गर्छ, पहिलो पटक पछि, यो मिठाईमा निर्भर गर्दछ, तपाइँ जोड्नुहुन्छ वा आफ्नो रुचिमा टाढा लैजानुहुन्छ। मलाई आशा छ कि म सहयोगी भएको छु।
स्पष्टीकरण को लागी धेरै धन्यबाद, Mª। कार्मेन त्यसोभए तपाईंले मलाई सोध्नु भएको खण्डमा मलाई थाहा छ। बधाई र शुभ छुट्टि !.
नमस्ते Mª। होसे, तपाईंलाई थाहा छ यो तपाईंको स्वादमा निर्भर गर्दछ, तर सामान्य कुरा के हो भने मिठाईको १/१० भाग चिनीको मात्रामा थपिन्छ। सत्य यो हो कि सही मात्रा भन्न गाह्रो छ किनकि यसले हामीलाई चीजहरू कति मनपर्दछ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। बधाई र शुभ छुट्टि !.
कस्तो खेल म तपाइँको मेरो Thermomix प्राप्त गर्न लागिरहेको छु !! यो शानदार ब्लग को लागी धेरै धन्यवाद! क्लाउड केक सफल भएको छ!
Cnxy लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद, Cnxy। तपाईंले Thermomix बाट धेरै प्राप्त गर्नु पर्छ किनभने यो उत्कृष्ट छ। अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
सबैभन्दा पहिले, म तपाईंको ब्लगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन अद्भुत छ र प्रत्येक दिन मलाई धेरै मद्दत गर्दछ।
त्यसोभए तपाईलाई सोध्नुहोस् कि यदि मैले शर्बेटलाई आफूसँगै लैजान दिईन्छ (म मेरो आमाको घरमा खाना खाउँछु र मसँग समुद्री खाना पछि आफूसँगै लैजान चाहन्छु र मेरो परिवारलाई चकित तुल्याउँछु), कसरी फ्रिजरमा फ्रिजमा राख्न सक्दछु? धन्यवाद तपाईं धेरै धेरै
नार्टाडाइन शर्बत पनि धेरै राम्रो छ, तपाईंलाई मनपर्ने सबै फलहरू बन्न सकिन्छ किनभने मसँग तिनीहरू स्थिर, अनानास, आडू, केरा, ect ……………। टमेल्स, ग्रीटिंग्जहरू ………………………… ..
धेरै धेरै धन्यवाद, मारी कारमेन। मलाई अनानास मन पर्छ। शुभकामना।
एलेनोर पारा भन्यो
तपाईलाई भनौं कि त्यहाँ धेरै प्रकारका मन्डारिनहरू छन् र प्रत्येक एक फरक स्वादको साथ र प्रयास गर्नुहोस् र तपाईलाई यस विषयमा कसरी बुझ्न सकिन्छ, गत हप्ता हामीले "ओरोग्रेन्ड" मन्डारिन बेचिरहेका थियौं, तर यो हप्ता यो "क्लेमेनभिला" मन्डारिन हो। पूर्ण रूपमा फरक, परीक्षणमा जानुहोस् र हामी यी व्यञ्जनहरूलाई समृद्ध बनाउनेछौं। अभिवादन लियोनोर
लियोनोर पारालाई जवाफ दिनुहोस्
जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यबाद, लियोनोर। मलाई क्लेमेन्विला मन पर्छ। बधाई र २०११ मुबारक!
त्यो रिकुओ, मेरो विवाहमा उनीहरूले हामीलाई स्लीम शर्बत दिए, र सबै भन्दा फरक हुन, मैले मन्दारिन शर्बतको लागि सोधे, यो धेरै राम्रो थियो, धन्यबाद, मैले मेरो जीवनमा पहिलोपल्ट कन्नेलोनी बनाए, उनीहरू महान थिए, धन्यवाद तिमी धेरै धेरै केटीहरू, चुम्बन, रमाईलो
नमस्ते नाटी, मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो शर्बत (र क्यान्नेलोनी) मनपर्‍यो। सत्य यो हो कि विशिष्ट एक नीबू हो, तर त्यहाँ अरु पनि छन्, यस्तै एक, जो धनी छ। अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
मार गुआस्च भन्यो
खैर, तपाईंसँग प्राकृतिक जुसका लागि व्यञ्जनहरू छन्? मैले प्रयास गरें तर ... उनीहरूले मेरो लागि बाहिर काम गरेनन् ...
फेरि पनि धन्यबाद!!
Mar Guasch लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मार्च, हामीसँग, रेसिपी सूचकांकमा हेर्नुहोस्, हामीले स्ट्रबबेरी जुस, किवी जुस, सुन्तलाको रस र सुन्तला र स्ट्रबेरीको रस प्रकाशित गरेका छौं। यदि तपाईंलाई स्मूदीहरू मनपर्दछ भने हामीले केरा स्मूदी र खुबानी स्मूदी पनि प्रकाशित गरेका छौं। अभिवादन र म आशा गर्छु कि तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ।
धन्यवाद! खैर, मैले मन्डारिन शर्बत बनाएँ र यो सफल भयो! तयार गर्न सजिलो, शानदार! अब म रस हेर्न लगाउनेछु, हेर्न कि त्यहाँ धेरै भाग्य छ कि छैन!
धन्यवाद फेरि र ... राम्रो वर्ष!
शुभ साँझ, म तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु कि साचारिन वा स्पार्टन थपेको अवस्थामा तपाईलाई चिनी जस्तो झिक्न पर्छ?
धन्यबाद, जहिले जहिले पनि र सबैलाई खुशी छुट्टीहरू।
सेतोलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार ब्लान्का, स्याकारिन पहिले नै पल्वराइज गरिएको छ तर मँ त्यसो गर्न चाहन्छु यदि त्यहाँ कुनै प्रकारको गांठ छ र ​​हामी निश्चित गर्छौं कि यो शर्बतको लागि उपयुक्त छ। बधाई र शुभ छुट्टि !.
Mindy russo भन्यो
मिंडी रसोलाई जवाफ दिनुहोस्
म यस वर्षको अन्त्यमा गर्ने योजना गर्दैछु, मलाई लाग्छ अंगुरहरूसँगै यो राम्रोसँग मिल्नेछ।
Tere लाई जवाफ दिनुहोस्
म आशा गर्दछु तिमी तेरे मन पराउछौ। घरमा हामीलाई यो मन पर्छ। बधाई र २०११ मुबारक
क्याटि लिलो भन्यो
यो राम्रो देखिन्छ! तर मलाई लाग्छ कि म एक सानो भिन्नता ल्याउनेछु .. म काभा एक्स्टर गर्न चाहन्छु .. यो पानीको सट्टा १०० ग्राम हुन्छ कि म अरू केहि राख्न सक्दछु र यदि मैले यसलाई बरफले गरें भने कति हुन्छ? मैले राख्नु पर्छ? धेरै धेरै धन्यबाद, तपाई उत्कृष्ट हुनुहुन्छ!
क्याटी Lillo लाई जवाफ दिनुहोस्
यसलाई सबै सामग्रीहरूको साथ राख्नुहोस्, करीव २०० जीआर राख्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि तपाईं केही थप थप्न सक्नुहुन्छ, तर जहिले पनि ध्यान दिनुहोस् कसरी बनावट रहन्छ, यसलाई धेरै तरल हुनुबाट जोगिन।
ठीक छ भन्यो
धेरै राम्रो, मेरो परिवारले यो मन परायो, नयाँ वर्षको शुभकामना
उत्तर ठीक छ
म धेरै खुसी छु, Fina! बधाई र २०११ मुबारक!
क्रिस्टीना क्वाइल्स भन्यो
यो थियो, पछिल्लो रात जब मेरो श्रीमान्‌ र मैले यसलाई प्रयास गरें, भयानक !!! =) तपाईंको रेसिपीहरूको लागि धन्यवाद, तिनीहरू उत्कृष्ट छन् र पक्कै पनि मन्दारिन शर्बत उडान रंगहरूसँग पास गर्दछ !!!! hehehe राम्रो काम केटीहरू !!!!
CRISTINA QUILS लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै क्रिस्टिना धन्यवाद।
नमस्ते केटीहरू, म तपाईंको व्यञ्जनहरू मन पराउँछु, मैले यस शर्बत कहिल्यै गरेको छैन, तर यसलाई प्रयोग गर्न त्यहाँ बाँकी छैन।
एक सानो चुम्बन।
Sipos लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं पक्कै पनि यो महान लाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अभिवादन र हामीलाई बताउन।
पहिले तपाइँलाई तपाइँका व्यञ्जनहरुमा बधाई छ जुन महान छ।
म टिप्पणी गर्न चाहान्छु कि म्यान्डरिन शर्बेट दर्शनीय थियो, केवल जब मैले यसलाई खाएँ, ट्याger्गेरिन छाला एकदमै ध्यानयोग्य थियो। यो हुन सक्दछ कि मैले यसलाई ज्यादै चिच्याइनँ ?? अभिवादन र धन्यवाद
मलाई थाहा छैन यदि मैले आफैंलाई राम्रोसँग व्याख्या गरेको छु कि, स्पष्टतया मैले मन्डारिनहरू ताछें, मेरो मतलब छालाले खण्डहरूलाई ढाक्छ।
यसलाई धेरै लामो कुचोनुहोस् र अण्डा सेतोको साथ बनावट आदर्श हो र यस क्षेत्रको छाला कम देख्न सकिने छ।
सिल्भिया, तिनीहरू थोरै देखिन सक्ने छन् यद्यपि हामी यसलाई मन पराउँछौं, तर मेरी आमाले यसलाई अधिक पीस गर्दछ र अण्डाको सेतो थप गर्दछ। त्यसैले यो एक आदर्श बनावट छ।
धेरै छिटो उत्तरको लागि धेरै धेरै धन्यबाद। म फेरि प्रयास गर्नेछु, वास्तवमा मसँग पहिले नै थप फ्रिजन्ड मन्डारिनहरू छन्।
तपाइँले मलाई भन्नुहुनेछ यो तपाइँको लागि कसरी काम गर्दछ। शुभकामना
ठिक छ, हिजो मैले यसलाई अधिक क्रुश बनाएँ र मैले सेतो थपें ​​र यो एकदम राम्रो थियो। तपाईको व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद।
मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन पर्यो। मैले पनि ती मध्ये केही सुधार गर्नुपर्‍यो र तपाईं फरक भन्न सक्नुहुन्छ।
कुकी आइसक्रीम शानदार थियो
धेरै धेरै धन्यवाद, व्यंजनहरु महान हो, अभिवादन
त्यो नुस्खा कहाँ छ?
नमस्ते, सिल्बिया, मन्डारिन शर्बत, धेरै राम्रो प्रश्न, म कति लामो बाकसमा ट्यान्जाइन पाउन सक्छु, धन्यवाद?
कम्तिमा तीन महिना समस्या बिना, त्यसपछि यसले स्वाद पनि गुमाउन सक्छ।
मेरो प्रेमीले तपाइँको वेबसाइट पत्ता लगायो, र हिजो उनले मलाई मन्दारिन शर्बत, मम्म्म्, कति स्वादिष्ट, कति स्वस्थ, कति स्फूर्तिदायी (जनवरीमा पनि) र कसरी सजिलो बनाउनको साथ छक्क पारे ... तपाईले अरूको लागि माग्न सक्नुहुन्न। धेरै धेरै धन्यवाद।
मारिया, म खुशी छु कि तपाईलाई यो मन पर्यो। मेरो श्रीमान् पनि sorbets को बारे मा पागल छ र घरमा मँ सँधै पनी फल बनाएको छु।
नमस्ते सिल्भिया, मसँग एउटा प्रश्न छ र म यस पक्षको लागि इन्भर्ट चिनी थप्छु, म उनलाई राख्न सक्दिन कृपया मलाई भन्नुहोस् म कसरी गर्छु, धन्यवाद
आना, मलाई थाहा छैन यो कस्तो हुन्छ। मैले यो कहिल्यै शर्बतको साथ प्रयोग गरेको छैन, म यसलाई आइसक्रिमको साथ प्रयोग गर्छु। ठीक छ, चिनीले के गर्दछ मद्दत गर्दछ जब यो फ्रिजरमा छ त्यसैले यसले क्रिस्टलाइज नगरी र मलाई क्रीमीचर बनाएको छ। जे होस्, शर्बत फ्रिज फल वा बरफको साथ बनेको हुन्छ र तुरुन्तै खपत हुन्छ। यो उल्टो चिनी जोड्न आवश्यक छैन।
मा येशू भन्यो
नमस्कार, मैले तपाईंको ब्लग फेला पारेको छु र मलाई यो मनपर्दछ! आज शर्बत सफल भएको छ। यो केटीहरु राख्नुहोस् !!!!
मा येशूलाई जवाफ दिनुहोस्
हाम्रो ब्लगमा स्वागत छ र मलाई खुसी लागेको छ कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो। शुभकामना
मिमी यो महान हुनु पर्छ। म तपाईंलाई द्रुत चीजको लागि एक नुस्खा भन्न जारी राख्नेछु किनकि हिजो मैले मेरा बच्चाहरूसँग अति सजिलो बनाएको छु, मेरा बच्चाहरूले मलाई राम्रो सहयोग गरे ... लिटर र आधा दुध, che चीज, २०० चिनी, कारमेल र कुचिएको कुकी बेस bellocidad 8 तापमान 200 समय5मिनेट र फ्रिज मा चिल, यसलाई प्रयास गरी मलाई बताउनुहोस्।
धन्यबाद एलेना, यो नुस्खा एकदम राम्रो देखिन्छ, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुपर्‍यो। शुभकामना
सिल्भिया एक प्रश्न जहाँ म पेस्ट र findहरू फेला पार्न सक्छ किनभने तरिकाहरू राम्रो देखिँदैनन् मलाई कहाँ किन्ने भनेर थाहा छैन
अना, मैले तिनीहरूलाई कहिले पनि खरीद गरेको छैन तर कहिलेकाहीं म फेसबुक समूहमा सुन्छु कि मानिसहरूले यसलाई अनलाइन खरीद गर्छन्। यसलाई गुगलमा खोज्नुहोस्, निश्चित रूपमा तपाईं अनलाइन स्टोरहरू पाउनुहुनेछ र ती प्रायः राम्रो हुन्छन्।
मलाई क्रीमी क्रीम बनाउन के गर्नुपर्छ? एस्क मँ बुझ्दिन के के केमा समय लगाउँदैन र त्यो?
तपाईंले भर्खरै यसलाई कुचोल्नु पर्छ, र यदि तपाईंले अंडेको सेतो जोड्नुभयो भने यो क्रीमियर बाहिर आउँदछ। तपाईंले समय राख्नुहुन्न किनकि यो खण्डहरूको आकारमा निर्भर गर्दछ र तिनीहरू कसरी स्थिर छन्, कहिलेकाँही तपाईंलाई आधा मिनेट बढी वा कम चाहिन्छ।
सिल्भिया मैले तपाईंलाई मेरो नयाँ ईमेल ठेगाना छोड्न छोडें uchirubi@gmail.com
Mª कारमेन Alonso भन्यो
सबैलाई नमस्कार, यस गर्मीमा मैले Thermomix खरीद गरें, म मात्र भन्ने छु कि म त्यस्तो निर्णय गरेको समयलाई आशीर्वादमा म एक हुँ। म अझै पनि प्रयोगात्मक चरणमा छु, तर म खुसी छु। म स्विस बनको बारेमा पागल भएँ तर यसको रेसिपी भेटिएन। के कसैले मलाई एउटा बताउन सक्छ? सबै चीजको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
Mª Carmen Alonso लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते एम। कारमेन। म पनि उनीसँग व्यावहारिक रूपमा छोटो समयको लागि थिएँ, र मलाई नयाँ चीजहरू गर्न मनपराएकोले, यो पनि मैले गर्न सकेको सबै भन्दा राम्रो लगानी हो। हामी तपाईंको अनुरोधको नोट लिन्छौं।
व्यक्तिहरू जो यसलाई प्रयास गर्न चाहन्छन्: फलहरू जो बीउ, छाला वा धागोहरू छन्, शर्बतको लागि बनेको हुँदैन, तपाईंले उनीहरूलाई पहिले निचोरेर र जुस स्थिर गर्नुपर्नेछ।
Wilfred लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको सिफारिश को लागी धन्यवाद Wilfred, हामी यसलाई एक प्रयास दिनेछौं !!
नमस्कार !! के तपाईं केवल रस को साथ शर्बत बनाउन सक्नुहुन्छ?
नमस्कार अन्ना, म यो सिफारिश गर्दैन किनकि यो यति मोटो हुने छैन किनकि यसमा मन्दारिन खण्डहरू छैन ... लेख्नका लागि धन्यबाद!
म्यान्डेरिन शर्बतको लागि जब तपाईं भन्छन् फ्रिज गरिएको ट्याger्गेरिनहरू, निम्बू साथै छाला सहितको ट्याger्गेरिनहरू, धन्यवाद
मलाई नियुक्त गर्नुहोस्,
दुबै म्यान्डारिन र कागती छालाविना र बीजविहीन हुन्छन् र यो महत्त्वपूर्ण छ कि लिम्बूको सेतो भाग नहुनु पनी वरपर छ। केवल चीज चीज स्थिर गरिएको छ म्यान्डारिनहरू, बाँकी आवश्यक छैन।
तपाई हामीलाई यो बताउनु हुन्छ भने।
मलाई याद छ कि मसँग क्लीमेन्टिनहरू फ्रिजरमा छ र लिंबन पनि म शर्बत तयार पार्न जाँदैछु।
कस्तो स्वादिष्ट, तेरे। तपाई हामीलाई के सोच्नुहुन्छ बताउनु हुन्छ।
कति ट tan्गारिनहरू पहिले नै छर्किएका छन्?
हो, तिनीहरू पहिले नै खुलिदिएका र स्थिर गरिएका छन्।
लिम्बू तेल को साथ स्टीम श्वेतवर्धक